Wararka - Dawooyinka bayoolojiga xoolaha iyo isticmaalkooda
I. Dhowrista iyo Gaarsiinta Biyo-dawooyinka
(1) Tallaalladu waxay u nugul yihiin iftiinka iyo heerkulka oo si dhakhso leh ayey u yareeyaan waxtarkooda, sidaa darteed waa in lagu hayaa qaboojiyaha 2 ilaa 5 ° C. Ka gaabinta firfircoonida tallaallada sida barafowga waxay saameyn taban ku yeelaneysaa waxtarka, sidaas darteed qaboojiyaha lama qaboojin karo, taasoo keeneysa in tallaalka uu barafoobo oo fashilmo.
(2) Marka tallaalka la keenayo, weli waa in lagu hayaa xaalad qaboojiye ah, oo lagu raraa baabuur qaboojiye ah, lana gaabiyo waqtiga dhalmada sida ugu macquulsan. Kadib markaad gaarto meesha loo socdo, waa in lagu rido qaboojiyaha 4 ° C. Haddii aan la rarin karin gaari qaboojiye ah, waa in sidoo kale lagu qaadaa iyadoo la isticmaalayo caag barafoobay oo la qaboojiyey (tallaalka dareeraha ah) ama baraf qallalan (tallaalka qalalan).
(3) Talaalada ku tiirsan unugyada, sida talaalka dareeraha ee turkey-herpesvirus ee talaalka Marek, waa in lagu hayaa nitrogen dareere ah oo laga jaray 195 ° C. Inta lagu jiro muddada kaydinta, hubi haddii dareeraha nitrogen ee ku jira weelka ay baaba'ayaan toddobaad kasta. Haddii ay dhowdahay in la waayo, waa in lagu kaabaa.
(4) Xitaa haddii waddanku oggolaado tallaal u qalma, haddii si aan habboonayn loo kaydiyo, loo qaado oo loo isticmaalo, waxay saameyn ku yeelan doontaa tayada tallaalka oo waxay yareyn doontaa waxtarkeeda.
Marka labaad, isticmaalka tallaallada waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan arrimaha
(1) Marka ugu horeysa, waa in la aqriyaa tilmaamaha ay isticmaasho warshada dawooyinka, iyo iyadoo la raacayo isticmaalkeeda iyo qiyaasta ay leedahay.
(2) Hubi in dhalada tallaalku ay leedahay shahaado baaris xabag ah iyo inay ka badan tahay taariikhda uu dhacayo. Haddii ay dhaaftay taariikhda uu dhacayo tallaalka, lama isticmaali karo.
(3) Tallaalku waa inuu gabi ahaanba ka fogaadaa soo-gaadhista qorraxda.
(4) Saliingaha waa in la kariyaa ama uumiya si otomaatig ah loo galiyaa waana in aan kemikal lagu dilin (aalkolo, stearic acid, iwm).
(5) Tallaalka qallalan kadib marka lagu daro xalka la qasi jiray waa in sida ugu dhakhsaha badan loo isticmaalaa waana in loogu adeegsadaa ugu dambayn 24 saacadood gudahood.
(6) Tallaallada waa in loo adeegsadaa xoolo caafimaad qaba. Tallaalka waa in la joojiyaa haddii ay jirto tamar la'aan, rabitaanka cuntada oo yaraada, qandho, shuban, ama calaamado kale. Haddii kale, ma aha oo kaliya ma heli karo difaac wanaagsan, waxayna kordhin doontaa xaaladdeeda.
(7) Tallaalka aan firfircooneyn Inta badan dadka wax lagu daro waa lagu daraa, gaar ahaan saliidaha way fududahay in la di'iyo Waqti kasta oo tallaalka laga soo saaray sirinjeerka, dhalada tallaalka si aad ah ayaa loo ruxay oo waxa ku jira tallaalka ayaa gebi ahaanba isku midoobay ka hor inta aan la isticmaalin.
(8) Masaasadaha faaruqa ah ee tallaalka iyo tallaallada aan la isticmaalin waa in jeermiska la diraa oo la tuuraa.
(9) Si faahfaahsan u diiwaangeli nooca tallaalka la isticmaalay, magaca sumadda, lambarka dufcadda, taariikhda uu dhacayo, taariikhda la duray, iyo ka jawaabista duritaanka, oo u xafid tixraaca mustaqbalka.
Ta saddexaad, tallaalka digaagga ee digaagga lagu durayo waa inuu fiiro gaar ah u leeyahay arrimaha
(1) ilaha biyaha laga cabo waa inay ahaadaan biyo nadiif ah oo aan lahayn jeermis jeermis isticmaalka kadib.
(2) Talaalada la khafiifiyey looma sameyn karo biyo ay ku jirto jeermis dile ama qeyb aashito ama biyo alkaline ah. Biyaha daadsan waa in la isticmaalaa. Haddii ay tahay inaad isticmaasho biyaha tuubada, ku dar qiyaastii 0.01 garaam oo Hypo (Sodium thiosulfate) ilaa 1,000 ml oo biyo tuubbo ah ka dib markaad ka saarto biyaha tubbada si aad u nadiifiso biyaha tubbada, ama u isticmaal 1 habeen.
(3) Biyaha cabitaanka waa in la joojiyaa kahor inta aan la tallaalin, qiyaastii 1 saac xagaaga iyo ilaa 2 saacadood xilliga qaboobaha. Xilliga kuleylaha, heerkulka boodada cad waa mid aad u sarreeya. Si loo yareeyo luminta fayraska tallaalka, waxaa lagugula talinayaa inaad hirgeliso tallaalka biyaha la cabbo marka heerkulku hooseeyo subaxa hore.
(4) Qaddarka biyaha la cabbo ee ku jira tallaalka la sameeyay wuxuu ahaa 2 saacadood gudahood. Qaddarka biyaha la cabbo ee tufaax kasta maalintii waxay ahayd sidan soo socota: 4 maalmood oo 3 ˉ 5 ml 4 toddobaad ah da'da 30 ml 4 bilood jir 50 ml
(5) Cabitaanka biyo halkii kun ee ml ku dar 2-4 garaam oo caano dufan ah si looga ilaaliyo tallaalka fayraska.
(6) Waa in la diyaariyo ilo biyo ah oo ku filan cabitaanka. Ugu yaraan 2/3 digaagga oo ku jira koox digaag ah ayaa cabbi kara biyo isla mar ahaantaana kala-gooyo iyo masaafooyin habboon.
(7) Daawada jeermiska biyaha lagu cabbo waa inaan lagu darin biyaha la cabbo 24 saac gudahood ka dib maamulka biyaha la cabo. Sababtoo ah xannibaadda faafitaanka fayraska tallaalka ee digaagga.
(8) Habkani waa ka fudud yahay kana badbaadin karaa shaqada cirbadeynta ama indha-indheynta, sanka, laakiin soosaarida unugyada difaaca jirka oo aan sinnayn ayaa ah faa'iido darradeeda.
Jadwalka 1 Fududeynta cabbitaanka biyaha la cabbo Digaagga da'da 4 maalmood jir 14 maalmood jir 28 maalmood jir 21 bilood jir ah Kala fur 1,000 qiyaasood oo biyo ah 5 litir 10 litir 20 litir 40 litir Xusuusin: Waa la kordhin karaa ama la yareyn karaa iyadoo loo eegayo xilliga. Afar, tallaalka digaagga lagu buufiyo waa inuu fiiro gaar ah u yeeshaa arrimaha
(1) tallaalka buufinta waa in laga xushaa beerta digaagga nadiifka ah waxaa sabab u ah hirgelinta tufaax digaag caafimaad qabta, habkan marka la barbar dhigo isha, sanka iyo hababka cabitaanka, waxaa jira duufaanno daran oo xagga neefsashada ah, Haddii uu ku dhacayo CRD wuxuu sameyn doonaa CRD ka xun. Tallaalka buufinta ka dib, waa in lagu hayaa maareynta nadaafadda wanaagsan.
(2) Doofaarka lagu buufiyey buufinta waa inuu ahaadaa 4 asbuuc ama ka weyn waana inuu marka hore qaataa qof lagu soo tallaalay tallaal nool oo aan nooleyn.
(3) Miisaannada waa in lagu rido qaboojiyaha 1 maalin ka hor tallaalka. Halkii kun oo kiniin ah oo lagu qasi karo ayaa loo isticmaalay baqashada 30 ml iyo kuwa wax lagu quudiyo ee 60 ml.
(4) Marka buufinta la tallaalay, daaqadaha, marawaxadaha hawo-qaadashada, iyo godadka hawo-qaadashada waa in la xidho waana in la gaadho gees ka mid ah guriga. Way ka fiican tahay in la daboolo dharka caagga ah.
(5) Shaqaaluhu waa inay xidhaan maaskaro iyo muraayadaha aan dabaysha kahoosayn.
(6) Si looga hortago cudurka neefsashada, antibiyootikada ayaa la isticmaali karaa ka hor iyo ka dib markii la buufiyo.
Midda shanaad, isticmaalka digaagga ee isticmaalka tallaallada
(1) Tallaalada digaagduur ee Newtown waxaa loo qaybin karaa tallaallada nool iyo tallaallada aan firfircooneyn.